Nanambara ny fangatahana maika mitentina 7.7 miliara dolara amerikana i WHO mba hampitsaharana ny fiakaram-bidy isan-karazany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fahasalamana » Nanambara ny fangatahana maika mitentina 7.7 miliara dolara amerikana i WHO mba hampitsaharana ny fiakaram-bidy isan-karazany
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • Tourism • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ny COVID dia miova amin'ny hopitaly be loatra
Miaraka amin'ny tranga COVID-19 betsaka kokoa notaterina tao anatin'ny 5 volana voalohany tamin'ny 2021 noho ny tamin'ny 2020 manontolo, dia mbola ao anatin'ny dingana mararin'ny areti-mandringana izao tontolo izao - na eo aza ny taha ambony amin'ny vaksiny any amin'ny firenena sasany miaro ny olona amin'ny aretina mafy sy ny fahafatesana.
Ny fangatahana 7.7 miliara dolara amerikana dia tsy filana famatsiam-bola fanampiny fa ao anatin'ny tetibola 2021 amin'ny ankapobeny an'ny ACT-Accelerator, izay ilaina maika ao anatin'ny 4 volana ho avy mba hiadiana amin'ny variana COVID.
Ny fitsapana tsy ampy sy ny tahan'ny vaksiny ambany dia mampitombo ny fifindran'ny aretina sy ny rafi-pahasalamana eo an-toerana.
Ny zava-misy ankehitriny dia mamela an'izao tontolo izao ho marefo amin'ny variant vaovao.
Firenena maro no iharan'ny aretin'ny aretina vaovao - ary na dia firenena be fidiram-bola be sy firenena manana fidiram-bola ambony aza dia nampihatra vaksiny miely, nametraka rafi-pitiliana matanjaka kokoa ary nametraka ny fitsaboana hatrany - maro ny ambany sy ambany -ny firenena sasany dia sahirana amin'ny fidirana amin'ireo fitaovana ilaina ireo noho ny tsy fahampian'ny vola sy ny famatsiana. Nanambara ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (OMS) fa ny fampiasam-bola amin'ny ACT-Accelerator hahafahana manome fitaovana ho an'ny rehetra, na aiza na aiza, dia handray soa amin'ny firenena rehetra amin'ny alàlan'ny valinteny ekena manerantany sy mifarindra kokoa.
Ny fidirana amin'ny COVID-19 Tools Accelerator (ACT-Accelerator) dia fiaraha-miasa manerantany amin'ireo fikambanana mamolavola sy manaparitaka ireo diagnostika, fitsaboana ary vaksiny vaovao ilaina hamaranana ny dingana mahery vaika amin'ny areti-mifindra. Ity fiaraha-miasa ity dia niforona tamin'ny fiandohan'ny areti-mandringana ho valin'ny antso nataon'ny mpitarika G20 ary natomboka tamin'ny volana aprily 2020 tamina hetsika niarahan'ny Tale jeneralin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana, ny filohan'ny France, ny filohan'ny Kaomisiona eropeana, ary ny Bill & Melinda Gates Foundation. Ny famatsiam-bola manerantany ho an'ny ezaka dia avy amin'ny fanentanana ny mpamatsy vola mbola tsy nisy toa azy, anisan'izany ny firenena, ny sehatra tsy miankina, ny mpanao asa soa ary ny mpiara-miombon'antoka maro.
Raha 4 karazana ahiahy manjaka amin'izao fotoana izao ny epidemiolojia, misy ny tahotra sao hisy karazana ahiahy vaovao, ary mety hampidi-doza kokoa.
Miaraka amin'ny fandresena azony mafy nandritra ny 3 volana farany teo, dia tafakatra US $ ny ACT-AcceleratorAntso avo 7.7 miliara, ny Rapid ACT-Accelerator Delta Response (RADAR), hamonjy haingana:
Fitsapana amin'ny ambaratonga: 2.4 miliara dolara amerikana hametrahana ny firenena ambany sy ambany ny fidiram-bola amin'ny làlana mankany amin'ny fiakarana folo heny amin'ny fanandramana COVID-19 ary hiantohana ny firenena rehetra hahatratra ny haavon'ny fanandramana mahafa-po. Izany dia hanatsara ny fahatakarana eo an-toerana sy manerantany ny fiovan'ny epidemiology amin'ny aretina sy ireo karazam-piahiahy mipoitra, hampahafantatra ny fampiharana sahaza ny fahasalamam-bahoaka sy ny fepetra ara-tsosialy ary ny fanapahana ny rojom-pitaterana.
Tazomy ny ezaky ny R&D hijanona eo alohan'ilay virus: 1 miliara dolara amerikana ho an'ny R&D mitohy, ahafahana mamolavola tsena sy manamboatra, fanampiana ara-teknika ary famokarana fangatahana mba hiantohana fa ny fitsapana, ny fitsaboana ary ny vaksinina dia mandaitra manohitra ny karazana Delta sy ireo karazany hafa mipoitra, ary mora azo sy takatry ny vola izy ireo amin'izay ilana izany.
Mila mamonjy ain'olona ny oksizenina maranitra: 1.2 miliara dolara amerikana hamahana haingana ny oksizenina maranitra mila fitsaboana ny marary mafy ary hifehezana ny fiakaran'ny fahafatesan'ny olona vokatry ny karazana Delta.
Fanaparitahana fitaovana: 1.4 miliara dolara amerikana hanampiana ny firenena hamantatra sy hiatrika ny sotron-tavoahangy manan-danja amin'ny fametahana sy fampiasana ny fitaovana COVID-19 rehetra. Rehefa mihombo ny famatsiana vaksinin'ny COVID-19 amin'ny volana ho avy dia ilaina ny famatsiam-bola malefaka hanampiana ny famenoana ireo banga eo an-toerana.
Arovy ireo mpiasan'ny fitsaboana amin'ny laharana voalohany: 1.7 miliara dolara amerikana hanomezana mpiasan'ny fahasalamana roa tapitrisa PPE ampy fototra hiarovana azy ireo mandritra ny fikarakaran'izy ireo ny marary, hisorohana ny firodanan'ny rafitra ara-pahasalamana izay efa tsy ampy mpiasa sy be loatra ny mpiasa ara-pahasalamana ary misoroka ny fiparitahan'ny COVID-19.
Ankoatry ny antso mitentina 7.7 miliara dolara amerikana, dia misy ihany ny fotoana itehirizana ny famoahana vaksinina amin'ny alàlan'ny fampiharana safidy amin'ny telovolana fahaefatra 2021 ho an'ny vaksin 760 tapitrisa omena amin'ny tapaky ny taona 2022 ankoatry ny fatra omen'ny COVAX hatramin'ny faran'ny Q1 2022. Ny fanoloran-tena hitahiry ireo safidy vaksinina ireo amin'ny telovolana farany amin'ny taona ho an'ny fanaterana eo antenatenan'ny 2022 dia azo atao any Gavi / COVAX, ao anatin'ny tambajotra masoivohon'ny ACT-A.
Ny famatsiana vaksin 760 tapitrisa Dosis amin'ny alàlan'ny fampiharana safidy amin'ny telovolana farany amin'ity taona ity mba hahazoana antoka fa misy ny famatsian-tahiry azo ampiasaina hanaterana ny asa any amin'ny 2022 dia mitaky renivohitra maharitra. Ny fandefasana ireo doka 760 tapitrisa ireo dia mitentina 3.8 miliara dolara amerikana.
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tale Jeneralin'ny OMS, dia nilaza fa: "$ 7.7 miliara dolara no ilaina maika hamatsiambola ny asan'ny ACT-Accelerator hiatrehana ny fitomboan'ny Delta ary hametraka an'izao tontolo izao hamarana ny areti-mandringana. Ity fampiasam-bola ity dia ampahany kely amin'ny vola lanin'ny governemanta hiatrehana ny COVID-19 ary misy dikany etika, toekarena ary epidemiolojika. Raha tsy misy izao vola izao hampiatoana ny fandefasana Delta any amin'ireo firenena tena marefo, dia tsy isalasalana fa handoa ny vokany isika amin'ny faran'ny taona. ”
Carl Bildt, iraky ny manampahefana manokana ao amin'ny ACT-Accelerator, dia naneho hevitra hoe: Antony 19. Ny varavarankely hanaovana hetsika dia izao. ”
Ny ACT-Accelerator dia namoaka ny azy Q2 2021 Vaovao farany, izay manome topy maso ny fandrosoana natao tamin'ny fitondrana fitaovana COVID-19 mamonjy aina any amin'ny firenena manerantany, ary manasongadina ny ezaka natao mba hahazoana antoka fa afaka mandray sy manatsara tanteraka ny fampiasana countermeasure COVID-19 ny rafitra ara-pahasalamana, mandritra ny Aprily-ka hatramin'ny Jona 2021. Mampiseho ny fomba nitondran'ny fampiasam-bola natao ho an'ny ACT-Accelerator vokatra sy fiatraikany amin'ny ady atao amin'ny COVID-19.
Ny fiakaran'ny kabary eran-tany sy ny fandraisana andraikitra vaovao dia manome ny lanjan'ny imperative mba hahitana fitoviana amin'ny ady amin'ny areti-mandringana. Tao anatin'ny 15 volana mahery, tamin'ny 9 aogositra 2021, dia nanamafy ny mpamatsy vola ary nanome 17.8 miliara dolara amerikana ny filan'ny ACT-Accelerator US $ 38.1 miliara. Ity fahalalahan-tanana tsy mbola nisy toa azy ity dia nahatonga ny ezaka haingana indrindra sy mandrindra indrindra amin'ny tantara mba hamorona fitaovana hiarovana ny fiarovana ara-pahasalamana manerantany, ary hamoahana ny vokany izay ilana izany indrindra.
Ny zava-bita manerana ny andrin'ny ACT-Accelerator dia misy:
Andry diagnostika, iarahan'ny FIND sy ny Global Fund, miara-miasa akaiky amin'ny UNITAID, UNICEF, WHO ary mpiara-miombon'antoka amin'ny fahasalamana manerantany mihoatra ny 30 mba hampitomboana ny fahazoana miditra amin'ny teknolojia diagnostika COVID-19:
Maherin'ny 84 tapitrisa molekiola sy antigen fitiliana diagnostika haingana (RDT) nohazoana tamin'ny alàlan'ny Diagnostics Consortium
Ny famokarana isam-paritra dia nahazo tosika tamin'ny alàlan'ny famindrana teknolojia
Firenena mihoatra ny 70 no nanohana hanitatra fotodrafitrasa any amin'ny laboratoara ary hanatsara ny fitiliana.
Andry fitsaboana, iarahan'ny Wellcome, Unitaid, tohanan'ny WHO, UNICEF ary ny Global Fund:
Fitsaboana mitentina 37 tapitrisa dolara amerikana, ao anatin'izany ny doka dexamethasone 3 tapitrisa, ary ny famatsiana oksizenina 316 tapitrisa dolara amerikana.
Famantarana manohana ny fitsaboana voalohany mamonjy aina an'ny COVID-19 - dexamethasone - ary nanome torolàlana manerantany momba ny fampiasana azy.
Ny Taskforce vonjy taitra Oxygen an'ny COVID-19 dia navadika mba hanombanana sy hiatrehana ny fiakaran'ny COVID-19 amin'ny fangatahana fanapahana faty azo sorohana. Ny tsangambato koa dia nitady fifanarahana ho an'ireo mpamatsy ôksizenina lehibe indrindra manerantany - Air Liquide sy Linde - hiara-hiasa amin'ireo mpiaramiasa ACT-Accelerator amin'ny fampitomboana ny fahazoana oxygen amin'ny firenena ambany sy ambany. Ny fangatahana oksizena ara-pitsaboana amin'izao fotoana izao dia mihoatra ny am-polony mahery noho ny talohan'ny areti-mandringana.
Hatramin'ny nanombohan'ny areti-mandringana ka hatramin'ny 1 Jolay 2021, 97 $ US tapitrisa dolara amerikana (entana 2.7 tapitrisa) no nalefa tany amin'ireo firenena.
Ho fanampin'izay, tamin'ny telovolana farany, 219 tapitrisa dolara amerikana no nomena ny firenena amin'ny fividianana famatsiana oksizenina, ao anatin'izany ny mpanentana oksizenina sy ireo ozinina ôksizim-bahoaka vaovao, amin'ny alàlan'ny Mekanisma valiny COVID-19 Global Fund.
COVAX, andry vaksiny, dia iarahan'ny Coalition for Epidemikom-pirenena fanomanana (CEPI), Gavi, ny Vaksinina Vaksiny ary ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (WHO) - miasa miaraka amin'ny UNICEF ho mpiara-miasa manan-danja ary miaraka amin'ireo mpanamboatra vaksinina, fikambanana fiarahamonim-pirenena, ary ny Banky Iraisam-pirenena dia:
Nanafaingana ny fikarohana sy ny fampandrosoana portfolio-n'ireo kandidà vaksinina 11 manerana ny sehatra teknolojia 4.
Nandefa vaksiny 186.2 tapitrisa tamin'ny firenena sy toekarena 138 (hatramin'ny 5 Aogositra 2021). Amin'izany dia 137.5 tapitrisa ny doka nalefa tany amin'ny firenena sy toekarena AMC 84. Antenaina fa 1.9 miliara dosie no ho vonona halefa amin'ny faran'ny taona 2021. Amin'ireny, ny mpandray anjara amin'ny AMC dia antenaina hahazo doka 1.5 miliara, ao anatin'izany ny fatra nomena, mitovy amin'ny 23% ny isan'ny mponina (ankoatran'i India) .
Nanangana vondron-kery mpamokatra hamantatra sy hamaha ny olan'ny famokarana manakana ny fahazoana miditra amin'ny vaksiny amin'ny alàlan'ny COVAX. Ny Taskforce dia miatrika maika ny fanamby sy ny tavoahangy mandritra ny fotoana fohy ary miara-miasa amin'ny consortium any Afrika Atsimo mba hamindrana ny teknolojia ary hananganana tobim-pamokarana vaksinina any amin'ny faritra, hiantohana ny fiarovana ara-pahasalamana isam-paritra.
Health Systems Connector, iarahan'ny Global Fund, WHO sy ny Banky Iraisam-pirenena:
Tamin'ny faran'ny volana aprily dia nahazo PPE mitentina 500 tapitrisa dolara amerikana mahery, nanombantombana ny fahavononan'ny firenena amin'ny fametrahana vaksinin'ny COVID-19 any amin'ny firenena 140 mahery (miaraka amin'ny Banky Iraisam-pirenena, GFF, Gavi, ny Global Fund, UNICEF ary ny WHO), ary ireo fanakorontanana voarakitra an-tsoratra hatramin'ny 90% amin'ireo rafitra sy serivisy ara-pahasalamana amin'ny alàlan'ny fanadihadiana nasionaly amin'ny firenena mihoatra ny 100.
Ny fomba fijery voafaritra manokana momba ny tavoahangy sy ny fanamby mifandraika amin'ny rafitra ara-pahasalamana mitohy ary namolavola torolàlana sy fiofanana manerantany amin'ireo faritra rafi-pitsaboana marobe.
Nanampy tamin'ny fampihenana ny vidin'ny PPE, nahatratra ny tampon'ny fihenan'ny 90% amin'ny sarontava medikaly sy ny respirator N95 / FFP2. Na ny Global Fund, tamin'ny alàlan'ny COVID-19 Response mekanism (C19RM), sy ny Global Financing Facility, tamin'ny alàlan'ny COVID-19 Essential Health Services, dia nanome fanomezana ho an'ny firenena hividianana PPE, hizara fanafody ary hampiofana mpiasan'ny fahasalamana amin'ny famelana vaksininy hamafiso ny valin'ny firenena COVID-19.
Ny tahiry PPE efa napetrak'i UNICEF manerana ny trano fanatobiana entana any Copenhagen, Dubai, Panama ary Shanghai dia azo alaina avy hatrany ho an'ny firenena mila izany, miankina amin'ny fahazoana famatsiam-bola.